Local SEO Marketing နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်သင်လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 19, 2017 တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 19, 2017 Douglas Karr
ဒီမှာက Indianapolis မှာရှိတဲ့အိမ်တွင်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့တာပါ။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအများစုသည်ဒေသတွင်းအဆင့်သတ်မှတ်ရန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်အချို့ကိုသော့ဖွင့်ခဲ့သည်။ ဤသည်တိကျသောဖောက်သည်သော်လည်းအခြားမည်သည့်မြို့တွင်မရှိ, ဒီမှာယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်တန်ရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော site တစ်ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးအလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ အဆင့်မြင့်အကြောင်းအရာအချို့ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်၊ အချို့သောပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတွန်းအားပေးမှုများကိုအာရုံစိုက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လတာကာလအတွင်းတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့သည် - Blackhat စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ backlink အစီအစဉ်များ၊ သုတေသနများစွာနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာ မှလွဲ၍ အခြားအရာများမရှိပါ။ ၎င်းသည်၎င်းတို့သည်ရိုးရိုးသားသား၊ စျေးသက်သက်သာသာသာရှိသောယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသောစျေးကွက်တွင်၎င်းတို့အားရိုးရိုးသားသား၊
ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးမရှိတာကိုအံ့အားသင့်မိရုံပဲ။ ကောင်းသောဒေသခံရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization သူတို့ရဲ့ဆိုက်များနှင့်အွန်လိုင်းရှိနေခြင်းမှရောက်လာသောအခါ။ ၎င်းသည်မခက်ခဲပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အချိန်ကုန်ပြီးလိုအပ်သည့်နေရာကိုရောက်ရန်ခိုင်မာသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်အုတ်မြစ်လိုအပ်သည်။
အခြားဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လိုပဲငါ SEO ရှုခင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မရေမတွက်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများအတွက်သက်သေဖြစ်လာသည်။ ဤစာမူတွင်ကျွန်ုပ်၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များအားဒေသတွင်းရှာဖွေမှုရလဒ်များအပေါ်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအဆင့်အတန်းရရှိစေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်နေသောနည်းဗျူဟာအချို့ကိုမျှဝေမည်ဖြစ်သည်။ Itamar Gero, SEO ရောင်းချသူ
SEO Reseller မှဤသတင်းအချက်အလက်သည်ခိုင်မာသောစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်မဆို၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာရှာဖွေမှုတည်ရှိမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်လုံးဝအကြံပေးလိုသည်။ ခေါ်သည် ဒေသတွင်း SEO SEO (၁၆) ခုသည်ရက် ၂၀ အတွင်းသင်၏အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပြုပြင်သည်သတင်းအချက်အလက်သည်ဒေသန္တရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၊ အေဂျင်စီများ၊ သို့မဟုတ်ဒေသခံ SEO အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကိုပင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောပြုပြင်မှုများအားလုံးမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများထိုက်သင့်သည့်နေရာတွင်ပါဝင်သည်။
များအတွက်အကောင်းဆုံး မိုဘိုင်း - ဖော်ရွေ
implement အရှိန်မြှင့်မိုဘိုင်းစာမျက်နှာများ (amp)
implement ဒေသခံ Schema markup
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ အကြှနျုပျ၏စီးပွားရေး google စာရင်း။
သင်၏ Yahoo! ဒေသခံစာရင်းအသုံးပြု Yext.
သင်၏စီးပွားရေးစာရင်းအတွက်သင်၏ Bing Places များကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။
သင်၏ Yelp နှင့် Manta ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်များအားအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်။
အသုံး နေပြည်တော် စီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက်တသမတ်တည်းသေချာစေရန်။
နှင့်အတူ Facebook အတွက်အကောင်းဆုံး OpenGraph တံဆိပ်ကပ်ခြင်း.
သင်၏ Youtube လမ်းကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။
ဒီ site မှာသူတို့မေ့နေတဲ့ကြီးမားတဲ့တစ်ခုထပ်ထည့်ပါ။ add ဒေသခံကိုးကား စာမျက်နှာတိုင်းတစ်လျှောက်လုံး။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏အမည်၊ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်တိုင်းကိုသူတို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ဒေသများနှင့်အတူစာမျက်နှာတစ်ခုစီတွင်မကြာခဏတွေ့ရသည်။
Tags: Angie ၏စာရင်းwebsite ရဲ့ backlinkကားအညွှန်းgoogle ပေါင်း+ googleဒေသခံလင့်များဒေသခံ optimizationဒေသခံစာမျက်နှာဒေသခံအဆင့်ဒေသတွင်းရှာဖွေရေးဒေသခံရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationဒေသတွင်း seoဒေသခံ seo ပြင်ဆင်မှုများOn-site ကို optimizationအွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဝမ်းရောဂါ
ဧပြီ 29, 2016 မှာ 7: 42 AM
Local SEO သည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအဆင့်ကိုရှာဖွေခြင်းရလဒ်တွင်တိုးတက်စေနိုင်သည်။ SEO ဆိုသည်မှာအလွန်ကွာခြားသည်။ သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်ဒေသခံများအတွက်ကောင်းမွန်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပုံဖော်ခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်စွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒေသတွင်းရှာဖွေမှုရလဒ်များသည်အခြားမည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသတွင်း SEO ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်သည်